Kyoto University - Ọmụmụ na Japan. Higher Education ná Mba Ọzọ.
tọrọ ntọala : 1897
Students (ihe ruru.) : 23000
Echefukwala discuss Kyoto University
Ebe ọ bụ na ntọala ya siri na 1897, Kyoto University na-arụ ọrụ ịzụlite agụmakwụkwọ nnwere onwe n'okpuru a spirit onwe-adabere na ùgwù onwe onye, na-emeghe ọhụrụ horizons na ihe ndị ọkà mmụta na-agbalị. The University ka nwakwara-eme ka udo coexistence gafee ụwa na obodo.
Ụwa anyị ugbu a ọtụtụ ngwa ngwa mgbanwe nke ahụ gaara abụ apụghị ichetụ n'echiche na narị afọ nke 20. The zuru ụwa ọnụ agha Ọdịdị, nke e-atụ anya na-egbo na ọgwụgwụ nke Agha Nzuzo, n'ezie na-eto eto ma na mgbagwoju na osisi ike n'ihi nke agbụrụ na nke okpukpe esemokwu. N'otu oge ahụ, ijeụkwụ nke zuru ụwa ọnụ imebi gburugburu ebe obibi accelerates, enwetụbeghị ụdị isi ọdachi na-egbu egbu na-efe efe echi ọtụtụ gafee ụwa, na ego ọdụdọ ịma jijiji ma mba aku na na-ebi ndu ka nnọọ isi. Mahadum kwesịrị iche echiche banyere ihe ha na-eguzo n'ihi na ndị a na-agba aghara. Ka ọ dịgodị, na Japanese ọchịchị na-arụ ọrụ na mahadum na ụlọ ọrụ na-akwalite cultivation nke zuru ụwa ọnụ bụ mmadụ isi obodo, na-akpọku mahadum ime eme mgbanwe e mere iji bulie ha ịsọ mpi mba. Kyoto University now kwesịrị ka a mata otú ka mma ime ihe a na-achọ n'aka gọọmenti na wider otu mgbe fọdụrụ ezi ya tọọ ntọala spirit.
The atọ isi ala nke a mahadum bụ agụmakwụkwọ, research, na-elekọta mmadụ onyinye. Abụọ ndị a, nnyocha na-elekọta mmadụ onyinye, bụ apt ịgbanwe omume ka uwa na ọnọdụ. Education, Otú ọ dị, nwere ihe dị oké mkpa ọdịdị na m kweere na-apụghị ịgbanwe agbanwe,. N'ikwekọ ya ntinye onwe nọọrọ onwe ha mmụta, Kyoto University aghaghị ịnọgide ebe dị a bastion nke agụmakwụkwọ nnwere onwe, ubé detached si n'ozuzu ọha mmadụ na unconstrained site ná mgbakọ. Iji mee nke, mahadum ga-a ebe agụmakwụkwọ mbọ ike n'ihu jụụ, mgbe na-enye windo n'ime ụwa ma otu. Ndị a na windo nwere ike meghere site ngalaba òtù onwem na ọnwụ onu ihe ọmụma nke ụwa na ọha mmadụ na-dị ma agafe, ma ihe kasị mkpa ọrụ anyị mahadum na-egwuri site ụmụ akwụkwọ ndị anwa anwa n'èzí windows. Anyị ga na-arụ ọrụ nke ọma na mmekọ na ụlọ ọrụ na ọchịchị na-enye windo na-ekwe ka ụmụ akwụkwọ na-eme ka ndị kasị mma bara uru iji ihe ikike ha mepụtara na mahadum.
Ọtụtụ mgbanwe nwere ugbu a underway na-ahụ na ego metụtara mahadum, gụnyere a iju ke ofụri ofụri operating ego na-eto eto mesiri ike na asọmpi ego. Ọ na-dị oké mkpa maka anyị iji nwetara onwe anyị ego ịrụ ndozi na izi gburugburu ebe obibi. M kwere na anyị ga-eme ka a ikpe na-wider otu banyere mkpa ọ dị ndị a ndozi, na olileanya nke inweta emesapụ aka nkwado si ulo oru na-atụ anya nke ukwuu nke Kyoto University, na na nke anyị Alumni. M na-atụ anya ewu ike mmekọrịta na ndị obodo, Ịnwetacha uru ịrụ ọrụ uru nke anyị na ọnọdụ na Kyoto-ahụ ụwa a ma ama isi obodo nke Japanese omenala-na-arụ ọrụ na ndị ọzọ na mahadum ịzụlite obodo ya n'ime a ọgaranya na iche iche agụmakwụkwọ campus. Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị na-aga nke ọma na-adọta pụtara ìhè ngalaba na ụmụ akwụkwọ si mahadum gafee ụwa, dị anyị mkpa ịzụlite mbụ curricula na nkwonkwo nyocha oru ngo na capitalize na Kyoto si nkiri, na-eme ka ha maara n'ụwa. Obi siri m ike na mgbalị ndị a ga-atụnye ụtụ dị ukwuu mmepe nke anyị region, na ọdịnihu nke Japan na ụwa dị ka a dum.
Dị ka a keukwu, research na-abara alụmdi, Kyoto University ga iwekota ya emesapụ nkà na ntọala agụmakwụkwọ, specialized Undergraduate mmụta, na-apụta jide nzere usoro mmụta ihe n'ụzọ na-akwadebe ụmụ akwụkwọ na creativity na ihe ike. Iji mee otú ahụ na-achọ mmepe nke izi ụzọ àjà a hierarchical ndokwa nke iche iche inye ihe ọmụma na Ọrụ a dịgasị iche iche nke mmụta nhọrọ. Ọ na-ewe oge maka ụmụ akwụkwọ na-aghọta ha nwere eme ihe n'ụzọ kasị zuo ezuo. M olileanya na anyị nwere ike inye a na-akwado mmụta gburugburu ebe obibi nke ụmụ akwụkwọ na-adịghị jiri ọsọ gaa na-eme mkpebi banyere ọdịnihu ha, kama pụrụ ịgbaso a mma usoro nke nnwale nke ga-enyere ha aka inwe obi ike na futures na ha emecha kpebie.
Iji nwee ụmụ akwụkwọ na ụba na-echepụta ike, niile ngalaba na nhazi mkpara ndị òtù ga-agba mbọ iji na-achụ nnyocha na-elekọta mmadụ onyinye, atumatu na-adọta mba ntị. Kyoto University nwere 10 faculties, 18 gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ, 14 nnyocha institutes (karịa ihe ọ bụla ọzọ mahadum na Japan), na ọtụtụ ndị ọzọ ọzụzụ na nnyocha ụlọ ọrụ. M ga-eme m nwere ike ime iji hụ na anyị na ihe mgbaru ọsọ ndị meworo gafee niile ndị a dị iche iche alaka nke mahadum obodo.
Gụsịrị akwụkwọ School of Letters
The forerunner of the Kyoto University was the Chemistry School founded in Osaka in 1869, nke, despite its name, taught physics as well. Mgbe e mesịrị, na Third Higher School was established in the place ofSeimi-kyoku na 1886, it then transferred to the university’s present main campus in the same year.
Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ, the current Kyoto University was established by merging the imperial university and the Third Higher School, which assumed the duty of teaching liberal arts as the Faculty of Liberal Arts. The faculty was dissolved with the foundation of the Faculty of Integrated Human Studies in 1992.
Ị chọrọ discuss Kyoto University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews